Cryptotrading - Fidirana sy ny Hivoaka Points - Blockchain News
Cryptotrading – Fidirana sy ny Hivoaka Points
Rahoviana no tsara kokoa ny mividy cryptocurrency? Ary raha-mivarotra? Ireo fanontaniana ireo Lavitra ny malaina. Na manarona ny fironana, ary tanteraka raha ho manina ny tombony amin'ny fihenan'ny ny hasarobidin'ny ny pananana dia miankina tanteraka araka ny tokony ho voafidy amin'ny fidirana sy ny fivoahana hevitra. Atomboka amin'ny, aoka isika hijery ny famaritana tsotra ny fidirana sy ny fivoahana hevitra miorina amin'ny fanohanana sy ny fanoherana andalana.
Efa nilaza fa rehefa uptrend fanorenana ny tsipika, dia miantehitra amin'ny hevi-dehibe roa ny vidiny sakana sy manamafy ny fironana ny fahatelo. Io teboka fahatelo no ho fotoana tsara indrindra mba hividy na hiditra ny tsena. Misy toe-javatra toy izany koa no hita amin'ny fironana midina, ihany no afa-tsy eto, ny fahatelo mikasika ny vidiny tsipika misy ahiahy manompo ho toy ny faneva mba hivarotra ny pananana na hivoaka ny tsena.
Mahomby fotoana hiditra an-tsena ihany koa ny vidiny amin'ny alalan'ny fiatoana anivon'ny mpanohitra rehefa vahana ny uptrend manomboka mitombo izao ihany. Mba hampihenana ny loza mety hitranga, amin'ny toe-javatra toy izany dia tokony hatao ny hiditra ny tsena amin'ny alalan'ny fandoavana fetra baiko raha tsara ny fanitsiana faritra.
Dia tokony ho raisina ho toy ny fitsipika izay ny fanitsiana fitontonganan'ny zara raha mihoatra 38% ny farany vita indray mitete, ary rehefa afaka izany,, ny vidiny miakatra matetika nandinika. Io faritra, atsy araka ny fara-vertex sy ny teboka ny 38%, izay fotoana tsara mba hividy.
Raha misy fironana Fitsimbadihan-javatra mazava sy ny tsena dia latsaka, zavatra mety ny tabilao mampiseho toy ny fandrosoana ny fanohanana tsipika, ny pananana dia tokony hamidy amin'ny ambany indrindra puncture ambonin'ny tsipika ity. Tsy sarotra ny hisambotra fotoana toy izany raha vao manomboka miaraka ny downtrend.
Tetikady iray hafa noho ny hiditra ny tsena dia nividy na nivarotra amin'ny countertrend. matetika, ny miakatra fitomboana countertrend fanamboarana fotsiny ao ambadiky ny fironana tsipika, nitodika azy amin'ny tsipika ny mpanohitra ho fanohanana tsipika. Rehefa mikasika ny vidiny tsipika ity, tonga ny fotoana hampiasa vola ao an-pananana.
Tamin'ny toe-javatra mifanohitra, rehefa countertrend mandrava ny fanohanana tsipika, mamadika izany ho fanoherana tsipika, ary indrindra raha ny fanitsiana ireo faritra teo akaiky teo, ny vintana ny soa aman-tsara avy any an-tsena fivoahana mitombo.
Ireo fomba efa voaporofo ny tenany ao amin'ny nanambara ny tsara na ratsy ny fironana, fa misy ny fomba hahazoam-bola amin'ny lalantsara 'ny fahamarinan-toerana. Ny fironana lateral afaka mitondra soa ho mpankafy ny fohy- ary ny antonony-teny ara-barotra. Hamantatra ny tandrify teboka ny fividianana na fivarotana, fepetra hizara ny fironana fisaka faritra iray tsipika marindrano eo afovoany. Ny fiakaran'ny vidiny ambony io tsipika dia famantarana hividy; eto ambany ny rano indray mitete ho amidy. Ity teknika miantehitra amin'ny an-tsena ny fironana mitombo na latsaka, rehefa niampita ny sisin-tany izay mizara izany amin'ny tapany.
Raha toa ianao ka efa nianatra ny fomba hamaritana ny fomba fandaharam-potoana vaovao iray vokany eo ny zava-dehibe ny vola, azonao atao ny manandrana ny hiditra ny tsena miorina amin'ny vaovao farany. Ny fitaka eto dia ny tsena rehefa tsy foana ny zava-mitranga eran unambiguously, ary fantatray maromaro ohatra, rehefa mpampiasa vola no nivarotra ny BitCoins tsy miandry ny fitomboana haingana ny ora vitsivitsy monja amin'ny ratsy crypto vaovao avy any Chine. We will discuss the intricacies of varotra on the news separately. Amin'izao fotoana izao, na izany aza, dia mampiseho mampihatra ny teknika voalaza. Zarao ny fahombiazana aminay ary hanaraka ny fanavaozana ny “Diniho ity” faritra.
Blockchain News 25 Janoary 2018
Indoneziana governmen ...
Previous Post:Browser mifototra amin'ny harena ankibon'ny tany dia lasa fahita matetika
Next Post:Belarosia fomba ofisialy legalizes crypto rehetra mifandraika raharaha sy ny varotra
Aprily 11, 2018 amin'ny 9:56 PM
Mey 12, 2018 amin'ny 8:14 AM
Mey 22, 2018 amin'ny 4:38 PM
Mey 29, 2018 amin'ny 11:33 AM
Jona 2, 2018 amin'ny 2:57 PM
I’ve been surfing on-line more than three hours these days, yet I never found any interesting article like yours. It’s pretty value sufficient for me. Raha ny hevitro, if all webmasters and bloggers made good content as you did, the web will probably be much more helpful than ever before.
Septambra 4, 2018 amin'ny 12:03 PM
Septambra 14, 2018 amin'ny 2:13 PM